FSX အပြည့်အဝနဲ့အပြီးအစီးအဓိပ္ပာယ် configuration ကို codes တွေကို
FSX အပြည့်အဝနဲ့အပြီးအစီးအဓိပ္ပာယ် configuration ကို codes တွေကို2နှစ်ပေါင်း5months ago #980
ဒါဟာဖွံ့ဖြိုးပြီးသူကို ESP ကပေးအပ်ခဲ့သည် FSX configuration များ။ သင်ဤကွန်ရက်စာမျက်နှာတခုကိုကိုးကားနှင့်သင့်စာရွက်စာတမ်းများအတွက်မိတ္တူရှိသည်ဖို့လိုပေမည်။
FSX အပြည့်အဝနဲ့အပြီးအစီးအဓိပ္ပာယ် configuration ကို codes တွေကို2နှစ်ပေါင်း5months ago #981
Oh, ဒါကြောင့်ငါ afterburners နှင့်အတူအကြှနျုပျ၏ 777 တပ်ဆင်နိုင်သလဲ ချိုမြိန်! ^ _ ^ အရမ်းရယ်ရတယ်
FSX အပြည့်အဝနဲ့အပြီးအစီးအဓိပ္ပာယ် configuration ကို codes တွေကို2နှစ်ပေါင်း5months ago #982
ဘယ်လို heck အတွက်ငါလေဆိပ်မှယာဉ်ရပ်နားနေရာများ add သလဲ? အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်း '' ကို Maintenance လေယာဉ်ရုံ #5 များ၏ရှေ့မှောက်၌ KDFW မှာအထူးသ, အခြို့ prnt.sc/ie8djp
FSX အပြည့်အဝနဲ့အပြီးအစီးအဓိပ္ပာယ် configuration ကို codes တွေကို2နှစ်ပေါင်း5months ago #983
ဤသူသည်ငါတကယ်အတွက် dabbled ကြပြီမဟုတ်တဦးတည်းဧရိယာဖြစ်ပါသည် FSXယခုငါအဓိကအားဖြင့်အပြေးနေပါတယ် P3Dv4 ကြောင်းရှည်လျားစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော 64 ESP ပလက်ဖောင်းကိုက်။ ဤတွင်ကျွန်မအသုံးဝင်သောဖြစ်စေခြင်းငှါ, ရှာတွေ့ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါသည်။ ငါသေးပါကသုံးစွဲဖို့အချိန်ကိုရှိခဲ့ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်ငါကြည့်ရှုကြသူအပေါင်းတို့ကိုဗီဒီယိုများ, ဒီတစျခုရေတွင်းကရှင်းပြဟန်
FSX အပြည့်အဝနဲ့အပြီးအစီးအဓိပ္ပာယ် configuration ကို codes တွေကို2နှစ်ပေါင်း5months ago #988
ဤတွင် CFG autopilot အပိုင်း autopilot စံဂျက်လေယာဉ်များ၏သင်တို့အဘို့နမူနာဖြစ်ပါသည်
လောင်စာဆီစီးဆင်းမှုအပေါ် fuel_flow_gain = 0.002 // Gain
inlet_area = 19.6 // စတုရန်းပေ, အင်ဂျင် nacelle ဝင်ပေါက်ဧရိယာ
rated_N2_rpm = 29920 // RPM, ဒုတိယအဆင့်တွန်း rated တန်ဖိုးကို
afterburner_available =0// Afterburner ရရှိနိုင်ပါ?
reverser_available = 1 // တွန်းကန်အား reverser ရရှိနိုင်?
ThrustSpecificFuelConsumption = 0.385 // ထိုးတိကျတဲ့လောင်စာသုံးစွဲမှု (ဂျက်)
AfterBurnThrustSpecificFuelConsumption =0// TSFC မှာပါဝင်တဲ့ afterburn / reheat နဲ့အတူ
Afterburner ကို = 1) ထားသင့်တယ်။0က false ကိုဆိုလိုသည်။ 1 ဆိုလိုသည်မှာမှန်ပါသည်။ သင်သည်လည်း Static_ Thrust = settings ကိုတိုးမြှင့်ရမည်။ ငါသိပ်မကြာမီဤဘာသာရပ်အပေါ်တစ် ဦး post ကိုဖန်တီးပါလိမ့်မယ်။
0.192 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်